UPHAWU LWAM LWEVALENTINE YEGAZI KUDOMINO, YAZISA NGEVINYL REISSUES, YONGEZA M B V KWI-STREAMING - IINDABA
Uphawu lwam lweValentine yegazi kuDomino, Yazisa ngeVinyl Reissues, Yongeza m b v kwi-Streaming
UValentine wam onegazi lityikitye UDomino , Kwaye namhlanje, ilebula ezimeleyo ikhuphe ikhathalogu yeqela le-shoegaze's Creation Records kwiinkonzo zokusasaza okokuqala. Ubude babo obugcweleyo Akukho nto kwaye Uthando kudala zifumaneka kwii-DSP; ii-albhamu ezisandula ukufumaneka zibandakanya ukubuya kwakhona ngo-2013 m b v .
Ukudityaniswa kuka-2012 ep's 1988-1991 kunye neengoma ezinqabileyo , ezibandakanya iingoma ezivela Undenze ndaqonda, Ndityise ngokwanga kwakho, Umtyibilikisi, kwaye Ingqungquthela , ikhululwe kuyo yonke imimandla ngaphandle kweMntla Melika. ( Umtyibilikisi kwaye Ingqungquthela zazifumaneka ukusasaza eMntla Melika ngaphambi kokusayinwa kukaDomino; Undenze ndaqonda kwaye Ndityise ngoKiss wakho ihlala ingafumaneki ukusasaza eMntla Merika.)
Ibhendi ikwasebenza kwii-albhamu ezimbini ezintsha zelebheli, ngokwe INew York Times : enye ifudumele kwaye imnandi, enye yovavanyo ngakumbi. UBilinda Butcher ucebise ukuba ibhendi izakugqiba ukurekhoda ukuphela kwalo nyaka. Ngaphandle komkhwa ombi wam weValentine Bloody yokulibaziseka okukhulu, uKevin Shields uthe: Andifuni ukuba yi-70-into efuna ukwenza irekhodi elilandelayo emva m b v . Ndicinga ukuba kuyabanda ukuyenza ngoku.
Zonke iirekhodi eziphinde zaphinde zaphinda zathunyelwa iintlelo ezintsha zomzimba , Eza kukhutshwa nguDomino ngoMeyi 21. Bukela ividiyo ebuyiselweyo kungekudala apha ngezantsi kwaye ujonge ngakumbi Iphepha le-YouTube .
Phinda ujonge udliwanondlebe lukaRyan Dombal lwango-2013 noKevin Shields wePitchfork.
I-Valentine yam enegazi: m b v
$ 33KuRhwebo oluRhabaxa $ 31eAmazon
I-Valentine yam enegazi: ngo-1988-1991
$ 16KuRhwebo oluRhabaxa $ 14eAmazon
Eli nqaku lapapashwa okokuqala ngolwesiThathu, Matshi 31 ngo-5: 30 kusasa eMpuma. Igqityelwe ukuhlaziywa ngeCawa, ngo-Epreli 11 nge-11: 43 kusasa eMpuma.
UKULUNGISWA: Ngokusekwe kulwazi olungachanekanga olusuka kupapasho lweendaba, ingxelo yangaphambili yeli nqaku ichaze ukuba ikhathalogu epheleleyo yebhanti yongezwe kwiinkonzo zokusasaza. Iindlela ezininzi zihlala zingekho.
I-albhamu entsha yediksi yamantshontsho
uAndrew w.k. AWUKHO wedwa
ithuba lokuba umvakalisi ancume
ngubani ilitye lokusila elilulamileyo
Utata john misty umfazi